Aaron Ramsey Ayaa Amaan Dul Dhigay Cristiano Ronaldo Muxuu Ka Yidhi Qaab Ciyaareedkiisa? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Aaron Ramsey ayaa amaanay Cristiano Ronaldo wuxuuna sheegay in saaxiibkiisa kooxda Juventus inuu yahay “wax aan la rumeysan karin”.
Ronaldo ayaa ku raaxeysanayay xilli ciyaareed kale, isagoo dhaliyay 25 gool 32 kulan oo uu ciyaaray ka hor inta aan loo joojin ololaha cudurka Coronavirus.
Ramsey ayaa kaliya yimid Turin ka hor xilli ciyaareedkaan qadka dhexe ayaana amaan buuxda ka helay xiddiga reer Portugal.
“Isagu waa ciyaartooy aan caadi aheyn,” ayuu u sheegay heesaaga Niall Horan intii lagu jiray wada hadalka Instagram Live, sidoo kale oo yidhi “Wuxuu ugu horreeyaa qolka jimicsiga, wuxuu marayaa howlaheedii oo dhan marka hore ka dibna wuxuu ku socdaa godka”.
“Waa guuleyste wuxuu doonayaa inuu guuleysto ciyaar walba ciyaar walba oo dhinac walba leh, wax walba oo ay tahayba markaasi waa uu joogi doonaa halkaasi isagoo ku tababaran laadadka xorta ah iyo waxyaabaha la midka ah iyo toogashada.
Uma baahnid inaan kuu sheego sida uu u fiican yahay ama loo wado, waa wax aan la rumeysan karin, waa midka ugu weyn taariikhda ciyaarta”
Ramsey oo 29 jir ah wuxuu go’aansaday inuu ku biiro Juve ka dib markii uu ka tagay Arsenal, halkaasoo uu kula guuleystay seddex FA Cup.
Xiddiga reer Wales ayaa sheegay in rabitaankiisa koobab badan – oo ay ku jirto Champions League uu ka dambeeyay dhaqaaqiisa.
Ramsey ayaa yidhi “Juve waa koox aad u weyn oo ah mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub waxaana jiray kooxo kale oo xiiseynayay, Laakiin markale, waxaan dareemay kaliya in ay iyaga doonayaan taariikhda ay heystaan ciyaartoy ay heystaan”.
“Dhowrkii sano ee ugu dambeeyay waxay runtii sifiican ku sameeyeen Champions League wayna garaaceen albaabka sidaa darteed waxaan rabaa inaan isku dayo oo aan ka caawiyo inay kaalin ka qaataan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen Champions League.
“Iyagu sidoo kale waa guuleystayaal koob Waxay koobab kula guuleystaan ​​koobab kadib koob sidaa darteed taasi waa wax kale oo aan doonayay inaan gaaro waa inaan meel uun aadaa oo aan u tartamo xilli ciyaareed kasta labo seddex afar koob.”